DHAGEYSO:Farmaajo iyo Kheyre oo go’aan la filayay ka gaaray Shirkii Garawe? | xushmo.com
DHAGEYSO:Farmaajo iyo Kheyre oo go’aan la filayay ka gaaray Shirkii Garawe?
Published on May 1, 2019 by xareed · No Comments
Waxaa beri oo Khamiis ah lagu wadaa in magaalada Garawe ee xarunta Puntland uu ka furmo shir uu iclaamiyay Madaxweynaha Puntlanad, waxaana shirkan lagu casuumay in ay kasoo qeyb galaan Madaxda dowlada Federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Ra’isul Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa kamid ahaa xubnaha lagu casuumay in shirka ka furmaya magaalada Garawe 2-da May in ay kasoo qeyb galaan .
Farmaajo iyo Kheyre ayaa labadii maalin ee lasoo dhaafay wadatashi balaaran ka lahaa sida ay ka yeelayaan shirkan soo boodada ahaa uu ku casuumay Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Deni kadib safaro uu uga soo laabtay Imaaraadka iyo Kenya.